Mozambika: Mitsabatsabaka amin’ny tolotra Simaiso (SMS) ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2010 18:48 GMT
Dika sarina fàfana avy amina tatitra an-tsarimihetsika tao amin'ny Youtube mitatitra tsy hafalian'ny vahoaka tao Maputo, an’ i Amanda Crossi, nozaraina sy nampiasàna ny CC Attribution – Non-Comercial- Share Alike license
Resaka betsaka mandeha eran-tany momba ny hetsi-bahoaka nanoherana ny fidangan'ny vidim-piainana tao Maputo tamin'ny 1-2 Septambra no naelin'ny hafatra Simaiso (SMS) avy tamin'ireo mpampiasa finday any amin'reo tanana mahantra ao an-drenivohitra..
Ny tolakandron'ny 6 Septambra, mpampiasa finday voaloa sanda mialoha avy amin'ireo orinasa roa miandraikitra izany ao Mozambika (Mcel and Vodacom) no nanomboka nitatitra fa tsy afaka nisitraka araka ny tokony ho izy ny tolotra Simaison-dry zareo. Maro tamin'ireo nanana fifanarahana kosa no nitatitra fa tsy nisy fahatapahana ny tolotra azon-dry zareo.
Na ny Mcel (an'ny fanjakana) na ny Vodacom (ananan'ny Filoha Guebuza petrabola) dia samy nilaza ho misedra “olana ara-teknika” ary miezaka mamerina ny tolotr'izy ireo.
Ny Misitra Mozambikana miadidy ny Fitaterana sy ny Fifandraisana, Paulo Zucula ary ireo mpandrindra dia nandà ampahibemaso ny fisian'ny fitsabatsabahana amin'ny tolotra finday.
Ireny fahatapahana ireny dia nanomboka taloha, ary nifarana taty aoriana mandra-pamoaky ny governemanta ireo fepetra hanarahamaso ny vidiny tamin'ny 7 Septambra. Ny tolotra SMS ho an'ireo mpampiasa mividy mialoha ny fandaniany koa dia samy niara-niverina tamin'ny laoniny teo amin'ireo tambajotra roa mpikirakira finday tamin'ny 8 Septambra [pt].
Ao amin'ny rindrina Facebook-n'i @ Verdade [pt], nanandrana namantatra ny tena zava-mitranga marina amin'ilay tolotra ireo mpampiasa. Ireo mpampiasa Twitter dia nahita ity fifanandrifiana ity ho tsy dia resaka “olana ara-tekmika” araka izay nambaran'ireo mpandraharaha tamin'ny mpanjifa.
Ny 1O Septambra, ny mpamoaka vaovao tsy miankina Mediafax dia nitatitra fa manana taratasy mitondra ny datin'ny 6 Septambra eo am-pelatanany izy, avy amin'ny sampandraharaham-panjakana mandrindra ny resaka finday tho an'ny Vodacom sy Mcel, mangatana azy ireo hanidy aloha ny tolotra SMS omena ireo mpanjifa mividy mialoha izay ho fandaniany. BBC koa etsy andanin'izay dia milazaho manana dika mitovin'io taratasy io.
Mandroso hevitra ny gazetin'ny @ Verdade fa tsy misy lalànamanery an'ireo mpandraharaha hanaraka io fangatahan'ny governemanta io, satria tsy misy fepetra fanao amin'ny tany misahotaka nampiharina nandritra ny fihetseham-bahoka. Nylalampanorenana Mozambikana dia miantoka ny fahalalaham-pitenenana.
Herinandro iray taty aoriana, my mpitondra tenin'ny Vodacom ao Afrika Atsimo dia nanaiky hanaraka baiko iray avy amin'ny governemanta ho fanapahana ny tolotra SMS. Saingy mandà ny hiotondra fanazavana mismisy kokoa ireo mpandraharaha roa ireo.
Misy sasantsasany amin'ireo mpampiasa Twitter no manakiana ny Vodacom ho nanaiky tamin-kalemena baiko iray izay mikendry ny hanisy sivana ny fifandraisan-davitra. Ireo Afrikana Tatsimo mpamjifa an'i Vodacom toa an'i @2point8photo dia nandefa bitsika (tweet) maneho ny rikorikony tamin'ny fandrenesana ny toy izany, ka milaza hoe “tànanay ho tompon'andraikitra ianareo”.
JPT, mpitoraka bilaogy ao amin'ny Ma-schamba dia nahamarika [pt] fa ireo manampahefana tompon'andraikitra amin'ity fanapahana ny fifandraisan-davitra vita kajikajy ity ao amin'ny governemanta no vao mainka manampy trotraka ny fisamantsamahana eto an-tanàna, izay efa nipatitaka teo aloha ho “simenitra” sy “mololo” — ankehitriny voazaran'ny “fifanarahana” sy “voaloa sanda mialoha”.
Muliquela, mpitoraka bilaogy, dia nitatitra tao anaty lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Apertar” (”Mikorisa midina”) [pt] fa ankehitriny ny governemanta dia manao tolo-dalàna manery ny tsy maintsy andraisana ny anaran'ireo mpampiasa SIM voaloa sanda mialoha ao Mozambika.